Uummanni Oromoo kan isa saame, lafasaarraa kan is buqqise fi mirga isaa kan sarbe sirriitti beeka: Obbo Abbaay Tsahaayyee – YEROOBLOG
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 January 17, 2016 January 17, 2016 2 Minutes
Sadarkaa ministeeraatti goorsaa Imaamata ootummaa muummicha ministeera Itoophiyaa fi hogganaa olaanaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay (TPLF) keessaa tokko kan ta’an Obbo Abbaay Tsahaayyeen Maastar Pilaanii Finfinnee wajjin walqabatee mormii Oromiyaa keessatti mootummaa biyya bulchaa jiru irratti ka’ef hooggantoota Dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromoo itti gaafatamu jedhaniiru.
Gaaffiif deebii Daani’eel Biraanee (gaazexeessaa fi abbaa weebsaayitii Horn Affairs) ka ta’e wajjin godhaniin, Obbo Abbaay, ” Maastar pilaaniin uummata Oromoo fayyaduuf kan hojjetame dha, garuu namoonni bulchinsa Godina Addaa Naannawaa Finfinnee keessa hojjetan hojiin malaanmaltummaa isaan hojjechaa turan akka saaxila hinbaaneef karooricha dura dhaabbataniiruu” jedhani. “Karoorichi guutummaa guututti Bulchinsi Mootummaa Oromiyaa itti amanee bulchinsa magaala Finfinnee wajjin kan qopheesse dha malee qaamni biraan qopheesse kan itti kenne miti”jedhaniiru. “Maastar pilaanicha Addi Bilisa Baasaa Tigraay hinqopheesine. Addi Bilisa Baasa Uummata Tigraay Finfinnee hinbulchu; mootummaa Feedaraalaas hinbulchu. Kan inni bulchu mootummaa naannoo Tigraay qofadha” jedhaniiru. Uummanni Oromoos ta’ee uummanni Itoophiyaa kan beeku, mootummaa Itoophiyaa gootummaa guutuutti kan hoogganu Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraaytiin ta’uu isaati. Obbo Tsaahaayyeen garuu kan hunda ni haalani.
Kana malees, Obba Abbaay, “Oromoon kan isa saame, kan lafarraa isa buqqise fi kan rakkoo irraan ga’aa ture eenyu akka ta’e sirriitti beekaa” jedhani. Dubbii isaanii kanarra akka hubachuun dandaa’amutti uummata Oromoo kan miidhe fi mirga isaa kan sarbaa jiru Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay osoo hintaane Dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromooti (DHDU) dha. “Nuti keessaa hinqabnuu;nu miti kan isin miidhe; kan isin miidhe dhaaba isiniif dhaabadhaanjira jedhudhaa”. Dhugaan jiru garuu, kan uummata Oromoo waggoota digdam shanan darbaniif DHDU fayyadamuun uummata Oromoo lafasaarra kan buqqisan, kan isa saaman, mirga isaa kan sarban, kan isa hidhan fi isa ajjeesaa kan turan dhaaba Tigree Obbo Abbaay Tsahaayyeefaa hooggananidha.
Obbo Abbaay miseensota DHADUO yakkanii mana hidhaatti naquu kan barbaadan fakkaata. Miseesoonni DHADUO sadarkaa giddu galeessaa fi gaad aanaarra jiran Maastar Pilaanii Misooma Qindaawa Magaala Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa mormanii turani. Kun immoo Obbo Abbaay Tsahaayyeeffaa baay’ee arseera. Kan irraan kan ka’e mormiin Oromiyaa keessatti kan ka’e DHADUOn hojii hojjechuu qabu sirriitti waan hinhojjenneefi amantaa jedhu qabu.
Mormiin Maastar Pilaanii ji’a lama dura jalqabe ammallee itti fufee jira. Humnoonni wayyaanees, Oromoota 140 ol ajjeessani; dhibba hedduutti lakkaa’aaman qaama hirri’asani kuma shanii ol mana hidhaatti naqaniiru. Kana booda egaa DHADUOn maastar pilaanii guutummaa guutuutti haqameera jedhee kan beeksise. Garuu, DHADUOn dhimmaa maastar pilaanii irratti murteessuuf aangoo hinqabu. Wanti DHADUOn jedhu uummata Oromoo biratti fudhatama hinqabu. DHADUOn hafeera hajjetu malee, Obbo Abbaay Tsahaayyeefaa dhimma kana dhiisuuf qophiirra kan jiran hinfakkaatan.
Walumaa galatti Obbo Abbaayfaa quba isaanii gara DHADUOtti qabaa jiru. Kanaaf, warri DHADUO waanta isaanitti dhufuuf jiru kanaaf ammuumaa ofqopheessuun irraa eegama.
Haasa’aa Obbo Abbaay Tsahaayyee gaazexeessaa Daani’eel Biraanee wajjin Amaarriffaan godhe liinkii itti aanu cuqaasuun ilaalaa~Abay Tsehay’s Interview With Daniel Birhane
Previous Post Oromo Demonstration in Brussels Demands European Union to take a Firm Stand against Ethiopian Government
Next Post EU Strongly Condemns the use of Excessive force by the Security forces in Oromia
One thought on “Uummanni Oromoo kan isa saame, lafasaarraa kan is buqqise fi mirga isaa kan sarbe sirriitti beeka: Obbo Abbaay Tsahaayyee”